मुलुकमा संघीयता सहितको नयाँ संविधान आयो । संविधान दिवस पनि मनाइयो । नयाँ संविधानमा नियम, कानुन, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र सबै लेखिए । तर नियम कानुन लेखिए मात्र । त्यसको कार्यान्वयन भने देखिएन ।
देशमा दिनप्रति हत्या, हिंसा, बलात्कार, लुटपाट र अराजकताले जरो गाडेको छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति जनताले पाउन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय त झन् असुरक्षित बन्दैै गएको सर्वसाधरण जनताको गुनासो छ । बाटोमा हिड्दा असुरक्षित, घरमा बस्दा असुरिक्षत, आखिर सुरिक्षत कता त ? खोज्नु पर्ने बेला आएको छ । दिनदहाडै हाम्रा छोरा छोरी , दिदी बहिनी असुरक्षित बन्दै गएका छन् । देशमा नियम कानुन छ की छैन ? आम सर्वसाधरण प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
त्यसो त कञ्चनपुरमा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी १३ वर्षिय निर्मला पन्तका आमाबाबु न्याय खोज्दै सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरबाट राजधानी काठमाडौं आएर फर्किए । स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वले हत्यारा खोज्न हैन प्रमाण मेटाउन लागिपरेको उनीहरूको आरोप थियो ।
अहिले घटना क्रम पनि त्यस्तै देखियो । न्यायको लागि घाटी सुकाउने मात्र होइन आमरण अनसननै बस्नु परेका उदाहरणहरु कायमै रहेका छन् ।
निर्मलाका आमाबाबु न्याय खोज्दै प्रधानमन्त्री ओलीदेखि नेपाल प्रहरीका आईजीपी सर्बेन्द्र खनाललाई भेटे । कुरो खाली न्यायमात्र हो अरु कुनै आशा थिएन । भेट पछि निर्मला पन्तका बुबा आमाले आशा जगाए । उनीहरु लागे जिल्ला तर्फ । के निर्मलाले न्याय पाउलिन अझै संकोच छ । आखिर कहिले ?
काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा निर्मलाका निम्ति न्याय अभियान अन्तरगत प्रदर्शनका क्रममा न्याय हराउने चिन्ता ब्यक्त गरेका बुबा आमाले आईजीपी सर्बेन्द्र खनाललाई भेटे पछि न्याय पाउने आशा जागेको बताए । बालिका निर्मला पन्तको हत्याको विरोधमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गर्यो ।
त्यसो त विशेषगरी अहिले निलम्बन रहेका तत्कालीन स्थानीय प्रहरी प्रमुखले बढी नै ज्यादती गरेको निर्मलाका आमाबाबुमात्र हैन घटनाबारे जानकारी राख्नेहरूले बताएका छन् । स्थानीय प्रहरी निर्मलाका हत्यारा जोगाउन लागेको देखेपछि आक्रोशित कञ्चनपुरवासीले सडकमा उत्रेर विरोध गरेपछि सरकारले केही सक्रियता त देखायो तर परिणाम देखिएको छैन ।
प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गरेको व्यक्ति डीएनए परीक्षणबाट निर्दोष ठहरिएपछि अनुसन्धानकर्ताको नियत र क्षमता दुवैमा प्रश्न उठेकोे छ ।
सायद, यही कारणले ठेलामा पानीपुरी र चटपटे बेचेर गुजारा चलाउने निर्मलाका आमाबाबु न्याय खोज्न राजधानीसम्म आएका हुन् तर, प्रहरीले नै प्रमाण संरक्षण गर्नुको साटो मेटाएको देखिएकाले घटना केही समयपछि सामसुम हुने सन्देह गर्नु अस्वाभाविक होइन ।
सरकारले नै अपराधी बचाउन खोजेपछि आफूहरूको छोरीले न्याय पाउने अब कुनै सम्भावना नदेखेको निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले बताइन् ।
छोरीका हत्यारा पक्राउ पर्लान् र छोरीलाई न्याय देला भन्ने आशा थियो झन् शंका बढ्दै गएको छ । डेढ महिनासम्म पनि न्यायको आस जीवितै राखे पनि अब भने त्यो पनि मरेको उनको भनाइ छ ।
आखिर न्यायको लागि यती ढोका घच्घचाउन पर्ने हाम्रो समाजमा अरु निर्मलाहरुले न्याय पाउलान त ? आखिर निर्मला हत्या काण्ड किन रहस्यमय बन्दै गएको छ ? आशा गरौं सत्य तथ्य छानविन गरी निर्मलाले न्याय पाउछिन र पाउनुपर्छ ।